Waraanni Maalii Hoogganoota Mootummaa Ce’umsaa To’annaa Jala Oolche
Caamsaa 25, 2021
Waraanni Maalii erga inni prezidaantii fi muummicha ministeera biyyattii to’annaa jala oolchee tuyyaa tokko booda gara biyyattii Afriikaa dhiyaa kanatti imalanii jiran.
Kibxata har’aa ECOWAS, Tokkummaa mootummootaa, gamtaa Afriikaa fi qaamonni sadarkaa addunyaa ka biroon ibsa waliin ta’uun baasaniin kan magaalaa Bamaakoo keessatti to’annaa jala ooluun gara waajjira haadoo kan waraanaa Kati cina jirutti geessaman prezidaanti Bah N’Daw fi muummichi ministeeraa Mocrar Ouan akka hiikaman gaafataniiru.
Prezidaant N’daw fi muummichi ministeeraa Ouane akkasumas ministeerri ittisaa Suleeymaan Doucoure erga isaan miseensota waraanaa lama keessaa hambisuu dhaan jijjiirraa kaabinee labsanii sa’aatilee hanga tokko booda to’ataman.
Namoonni lamaan mootummaa ce’umsaa akka hooggananiif waggaa darbe kan muudaman, waraanni prezidaantii yeroo Sanaa Ibraahim Boubacar Keita aangoo irraa darbuu dhaan aangoo qabatee baatii tokko booda. Mootummaan ce’umsaas filannoon prezidaantii fi kan mana maree Guraandhala dhuftu geggeessamuuf haala akka mijeessaniif tolfame.
Maaliin erga prezidaantiin duraanii Amadou Toumani Toure bara 2012 waraanni aangoo irraa fonqlchee, ripxe loltoonni Tuaareg magaalaa biyyattii gama kaabaa hedduu akka to’atan taasise. Ferensaay lootee seentota ittisuuf jecha waggaa itti aanu humnoota ishee gamasitti bobbaaste, rixe loltoonni garuu naannolee baadiyyaa keessa soss’uu itti fufan.